အဲ့ဒီအခန်း ဖြတ် !!! | ဒီရေ
အဲ့ဒီအခန်း ဖြတ် !!!
ဆင်ဆာ အဖွဲ့ နှင့်
♥۩۞۩♥ အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆုကို (ရပ်တော့မြစ်ဆုံ) ဇာတ်ကားဖြင့်
♥۩۞۩♥ အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇတ်ဆောင်ဆုကို (စီးပွားရှာတာလွယ်လိုက်တာ) ဇာတ်ကားမှဒေါက်တာနုနုသာ"
♥۩۞۩♥ အကောင်းဆုံးဗီလိန်ဆုကို (ငါလည်းချစ်သည်ဧရာဝတီ) ဇာတ်ကားမှ မျက်ရည်များဖြင့်အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်သွားသော ကျွန်တော်လည်းဧရာဝတီကိုချစ်ပါတယ် ဆိုသည့်
♥۩۞۩♥ အကောင်းဆုံးလူကြမ်းမင်းသားဆုကို (ငါ့လောက်တတ်သလားရေအား) ဇာတ်ကားမှ မီဂါဝှပ် ၁၅၀၀ပိုလျှံ၍ရောင်းစားရသည်ဆိုသော "
♥۩۞۩♥အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုကို (ငါလုံးဝမပါတော့မည်) ဇာတ်ကားတွင်နောက်ကွယ်မှ
အကောင်းဆုံးကြိုးကိုင်၍ ရိုက်ကွင်းအမိန့် ပေးသွားနိုင်သူ ဦးသန်းရွှေတို့က ရရှိမည်ဟု..ဟိုပါဒီပါ မီဒီယာသတင်း ရပ်ကွက်မှကြားသိရပါတယ်။